एक्कासी कसरी डुब्यो भक्तपुर ? हेर्नुस् तस्वीरहरू ! (फोटोफिचर) - Dainik Nepal
एक्कासी कसरी डुब्यो भक्तपुर ? हेर्नुस् तस्वीरहरू ! (फोटोफिचर)
दैनिक नेपाल २०७५ असार २८ गते ८:४५
भक्तपुर, २८ असार । १२ घन्टाको वर्षाले भक्तपुरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । घरसँगै शिक्षण संस्था, व्यवसाय, सडक, उद्योगधन्दा प्रभावित भएका छन् ।
उद्दारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ । नेपालीका सेनाका दुई प्लाटुनले तराई क्षेत्रमा जस्तो डुंगामार्फत् फसेकाको उद्दार गरिरहेको प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए ।
डुबानमा परेका २०० जना बढीको उद्दार भएको छ । प्रहरीका अनुसार बालकोट जाने बाटोमा बन्दै गरेको पुल बगेको छ भने अन्य क्षतिको विवरण आइसकेको छैन ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको मापन केन्द्रले २४ घन्टामा त्यो क्षेत्रमा ९३.६ मिलिमिटर पानी परेको देखाएको छ ।
महाशाखाकी मौसमविद् मञ्जु बासीले भक्तपुरमा योभन्दा बढी पानी परेको हुनसक्ने भए पनि एक्कासी डुबान हुने किसिमले पानी परेको अवस्था नभएको बताइन् ।
महाशाखाका अनुसार पछिल्लो १० घन्टामा नगरकोटमा ११७, चागुनारायणमा ७६ र भक्तपुरमा १२९.६ मिलिमिटर पानी परेको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले हनुमन्ते र मनोहरा खोलाका आसपासका धेरै बस्ती डुबानमा परेको बताए । यी दुई भक्तपुरका मुख्य खोला हुन् ।
हनुमन्ते खोलामा पानीको वहाव बढ्दा दुवाकोट, राधेराधे, लिवाली, सल्लाघारी र मध्यपुर डुबानमा परेका छन् । जगाती र बाराही स्थानका बस्तीमा पानी पसेको छ भने भूकम्पपीडितको शिविर डुबानमा परेको छ । मध्यपुरथिमीका राधेराधे र कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्र रहेका बस्ती पूरै डुबानमा परेका छन् ।
सयौँ घर डुबानमा परेपछि यहाँका बासिन्दा घरबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । मध्यपुरथिमीमा अरनिको राजमार्ग खण्डका दुवै क्षेत्र डुबानमा परेका छन् ।
चारदोबाटोबाट बालकोट जाने बस्ती र गठ्ठाघरको तल्लो भेग डुबानमा परेका छन् । मध्यपुर अस्पताल क्षेत्र र आसपासका घर पनि डुबानमा परेका छन् ।
यता मनोहरा खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि जडीबुटीस्थित सुकुम्बासी बस्ती पूरै डुबानमा परेको छ ।